လူအများ ဂရုမပြုမိသော ကင်ဆာလက္ခဏာများ - Hello Sayarwon
Dr. Zin Wai Yan Lin မှ ရေးသားသည်။ 02/10/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကင်ဆာရောဂါသည် သေစေနိုင်သော အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ကင်ဆာရောဂါ လက္ခဏာများ များစွာ ရှိသည်။ လူများသည် ၎င်းတို့ကို လျော့တွက်သောကြောင့် နောက်ကျမှ သတိထားမိကြသည်။ ဤဆောင်ပါးတွင် လူအများစု ဂရုမပြုမိသော ကင်ဆာလက္ခဏာများ အကြောင်းကို ဖော်ပြ သွားပါမည်။
ဆက်တိုက် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသံအက်ကွဲခြင်း
ချောင်းဆိုးခြင်း အများစုသည် ကိစ္စမရှိသော်လည်း ဆက်တိုက် ချောင်းဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် ချောင်းဆိုးသွေးပါခြင်း ဖြစ်ပါက အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ အဆုတ်တွင် ပြဿနာရှိသော ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်နိုင်ချေမှာ အဆုတ် ကင်ဆာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆက်တိုက် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသံအက်ကွဲခြင်း ဖြစ်ပါက CT scan သို့မဟုတ် ရင်ဘတ် ဓာတ်မှန်ရိုက်ရန် ဆေးရုံသို့သွားပါ။
ဝမ်းတွင် အရောင် သို့မဟုတ် ပုံစံ ရုတ်တရက်ပြောင်းလာပါက၊ ဝမ်းသွားရန် အလွန်ခဲယဉ်းလာပါက ၎င်းသည် အူမကြီးကင်ဆာ လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်သည်။ အူမကြီးတွင် အကျိတ်ခဲ ရှိနေနိုင်ပြီး ဝမ်း လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ အကြောင်းရင်းခံကို ဖော်ထုတ်ရန် အူမကြီးအတွင်းသို့ ပြောင်းသွင်း၍ ကြည့်နိုင်သည်။
ဆီးတွင် သွေးပါလာခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဆီးလမ်း ကြောင်း ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၏ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည်။ ပိုဆိုးပါက ဆီးအိတ် သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ်ကင်ဆာ၏ လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင် သည်။ ဤအန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေတွေ့ရှိပါက ကျန်းမာရေး အကူအညီ အမြန်ရယူပါ။
နာကျင်မှုများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါ က အန္တရာယ် မရှိပါ။ သို့သော်လည်း ရှင်းမပြနိုင်သော ဆက်တိုက် နာကျင်မှုများသည် အခြားအကြောင်း ဖြစ်သည်။ နာကျင်မှုဖြစ်သော နေရာပေါ်မူတည်ပြီး မတူညီသော ကင်ဆာ အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်သည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းသည် ဦးနှောက်ကင်ဆာ ၏ လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဗိုက်အောင့်ခြင်းသည် သားဥအိမ်ကင်ဆာ လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်သည်။
မှဲ့ အသွင်အပြင် ပြောင်းလဲခြင်း
မှဲ့တွင် နီရဲခြင်း၊ ယားယံခြင်း သို့မဟုတ် နာကျင်ခြင်း စသော ပြောင်းလဲခြင်းများတွေ့ပါက စစ်ဆေးအဖြေရှာရန် အထူးကု ဆရာဝန်ထံ သွားပါ။
မမျှော်လင့်ဘဲ သွေးထွက်ခြင်းသည် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကို ဖော်ပြသည်။ ရာသီလာခြင်းမဟုတ်ဘဲ မိန်းမကိုယ်မှ သွေးထွက် ခြင်းသည် သားအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ပြီး နှာခေါင်းသွေးထွက်ခြင်း သည် သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်နိုင်သည်။
သင့် အနာသည် ၃ပတ် နှင့် အထက်ကြာသည်အထိ မကျက်ပါက ကင်ဆာအကျိတ်၏ လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်တော်သော ကုသမှု ရရန် ဆရာဝန်နှင့် သွားရောက်ပြသပါ။
ရင်သားတွင် အလုံးစမ်းမိခြင်းသည် ရင်သားကင်ဆာ၏ လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင် အလုံးတစ်ခု တွေ့ရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် တတ်နိုင်သလောက် မြန်မြန် ပြသပါ။
သင်သည် အစားသောက် ထိန်းမထားသော်လည်း ကိုယ် အလေးချိန် ကျနေပါက ၎င်းသည် အန္တရာယ် အလွန်ရှိပါသည်။ သင့်တွင် အကျိတ် သို့မဟုတ် ကင်ဆာ ရှိသည်ဟု ညွှန်ပြခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
10 Cancer Symptoms Most People Ignore. http://www.womenshealthmag.com/health/ignored-cancer-symptomsAccessed January 20, 2017
10 Cancer Symptoms Most People Ignore. http://www.prevention.com/health/ignored-cancer-symptomsAccessed January 20, 2017
သွားမတိုက်ရင် ကင်ဆာဖြစ်မယ် သတိထား